Daawo Muuqaal: Sida loo Garaacay Xildhibaano katirsan Somaliland oo diiday Heshiiskii Imaaraatka - iftineducation.com
iftineducation.com – Kulan ay shalay ku yeesheen magaalada Hargeysa Xildhibaanada labada Aqal ee Maamulka Somaliland ayaa lagu ansixiyay in magaalada Berbera ay saldhig milatari ka dhistaan dowladda Imaraadka carabta.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed siilaanyo oo hor tagay Xildhibaanada labada Aqal khudbadna u jeediyay ayaa ka codsaday in ay Ansixiyaan heshiis ay la galeen Dowlada Imaaraarka Carabta oo lagu siinayo dhul ay saldjhig Milatari ka dhistaan.
Kulanka Baarlamaanka ayaa waxaa ka dhashay buuq xoogan oo markii dambe isku bedelay gacan ka hadal kadib markii Xildhibaanada qaar kasoo horjeesteen in la ansixiyo Heshiiska ay sheegeen in aysan xog badan ka aheyn waxa lagu heshiiyay.
Waxaa kualnka ka dhacay dagaal gacan ka hadal waxaana kulanka isaga baxay guddoomiyaha barlamaanka Somaliland C/raxmaan ciro, waxaa sidoo kale ciidanka Maamulkaasi kulanka xoog uga saareen Xildhibaano kale oo kamid ahaa kuwii heshiiska kasoo horjeestay.
Halkan ka Daawo Muuqaalka Gacan ka hadalkii dhacay.
Sida loo Garaacay Xildhibaano katirsan Somaliland oo diiday Heshiiskii Imaaraatka